Homeလောကဘီးမိုဘိုင်းဆိပ်ကမ်း crane တင်ဒါ TCDD JCC ကုမ္ပဏီ Liebherr ၏နူးညံ့၏ရလဒ်များကိုသူ့ရဲ့အယူခံဝင်ငွငျးပယျ
25 / 07 / 2012 Levent Ozen လောက, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှု 07 မေလ 2012 တစ်ရက်ဟာယပူဇော်သက္ကာစုဆောင်းအသစ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု၏ဝယ်ယူရေးနှင့်စပ်လျဉ်းမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ် "3 စုစုပေါင်းမိုဘိုင်းဆိပ်ကမ်းရိန်း (MHC) ဧည့်ခံဘီး" ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, JCC Liebherr ကုမ္ပဏီနု၏ရလဒ်သည်မိမိအယူခံငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
ဘီးမိုဘိုင်းဆိပ်ကမ်း crane တင်ဒါ TCDD JCC ကုမ္ပဏီ Liebherr ၏နူးညံ့၏ရလဒ်များကိုသူ့ရဲ့အယူခံဝင်ငွငျးပယျ 30 / 07 / 2012 တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှု 07 မေလ 2012 တစ်ရက်ဟာယပူဇော်သက္ကာစုဆောင်းအသစ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု၏ဝယ်ယူရေးနှင့်စပ်လျဉ်းမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ် "3 စုစုပေါင်းမိုဘိုင်းဆိပ်ကမ်းရိန်း (MHC) ဧည့်ခံဘီး" ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, JCC Liebherr ကုမ္ပဏီနု၏ရလဒ်သည်မိမိအယူခံငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ဒီအဆင့်မှာစာချုပ်နုအနိုင်ရသောကုမ္ပဏီနှင့်အတူလာမယ့်နေ့ရက်ကာလ၌လက်မှတ်ရေးထိုးလိမ့်မည်။ က ITALGRU 30.000.000 11.184.500 ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်အဖြစ်ယူရိုအနိုင်ရမယ့်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူနူးညံ့သောကမ်းလှမ်းမှုကို POUNDS ။ ရင်းမြစ်: Investments
အဆိုပါ JCC ဖို့တင်ဒါအယူခံဝင်၏ရလဒ်အဘို့အ TCDD ဘီး Liebherr မိုဘိုင်းဆိပ်ကမ်းရိန်းကုမ္ပဏီ 09 / 07 / 2012 စုဆောင်း tcdevlet မီးရထား (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှု 07 မေလ 2012 တစ်ရက်ဟာယပူဇော်သက္ကာအသစ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု၏ဝယ်ယူရေးနှင့်စပ်လျဉ်းမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ် "3 စုစုပေါင်းမိုဘိုင်းဆိပ်ကမ်းရိန်း (MHC) ဧည့်ခံဘီး" ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, Liebherr ကုမ္ပဏီအများပိုင်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအေဂျင်စီ (PPA) အတွက်ရလဒ်တွေကိုတင်ဒါလျှောက်ထားခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ IRB ဆုံးဖြတ်ချက်ဤအဆင့်မှာခန့်မှန်းထားသည်။ က ITALGRU 30.000.000 11.184.500 ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်အဖြစ်ယူရိုအနိုင်ရမယ့်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူနူးညံ့သောကမ်းလှမ်းမှုကို POUNDS ။ ref: ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဂျာနယ် 1083 / 04 2012 ဇွန်လ (EA) အရင်းမြစ်: www.yatirimlar.co ငါ
ဘီးမိုဘိုင်းဆိပ်ကမ်း crane တင်ဒါ TCDD ကုမ္ပဏီ ITALGRU အတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး 20 / 08 / 2012 စုဆောင်း tcdevlet မီးရထား (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှု 07 မေလ 2012 တစ်ရက်ဟာယပူဇော်သက္ကာအသစ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု၏ဝယ်ယူရေးနှင့်စပ်လျဉ်းမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ် "3 စုစုပေါင်းမိုဘိုင်းဆိပ်ကမ်းရိန်း (MHC) ဧည့်ခံဘီး" ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, တစ်ဦးနူးညံ့ ITALGRU 10 ကုမ္ပဏီနှင့်အတူသြဂုတ် 2012 11.184.500 ရက်ယူရိုအပေါ်တစ်ဦးစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက Liebherr ကုမ္ပဏီအဖြစ်လူသိများပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအေဂျင်စီ (PPA) အတွက်ရလဒ်တွေကိုတင်ဒါတစ်ခုကန့်ကွက်တင်သွင်းခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ JCC Liebherr ကုမ္ပဏီအကဲဖြတ်အယူခံဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်တင်ဒါ၏ရလဒ်များကိုသူ့ရဲ့အယူခံငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ref: ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဂျာနယ် 1092 / 06 2012 သြဂုတ်လ (EA) အရင်းမြစ်: www.yatirimlar.co ငါ
နု၏ ​​TCDD ဘီးမိုဘိုင်းဆိပ်ကမ်း crane ဆုရှင် ITALGRU ကုမ္ပဏီတစ်ခုကစာချုပ်ဘို့ရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည် 08 / 08 / 2012 တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) အထွေထွေညွှန်ကြားမှု 07 မေလ 2012 တစ်ရက်ဟာယပူဇော်သက္ကာစုဆောင်းအသစ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု၏ဝယ်ယူရေးနှင့်စပ်လျဉ်းမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ် "3 စုစုပေါင်းမိုဘိုင်းဆိပ်ကမ်းရိန်း (MHC) ဧည့်ခံဘီး" ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, နု 11.184.500 ITALGRU ယူရိုလေလံအနိုင်ရသောကုမ္ပဏီအတိတ်သီတင်းပတ်အတွင်းစာချုပ်ဘို့ရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ ပိုပြီးသတင်းအဘို့, နှိပျပါ: ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရင်းမြစ်: Investments
မိုဘိုင်းဆိပ်ကမ်းရိန်း၏ဝယ်ယူများအတွက်တင်ဒါ၌တွေ့ TCDD ဘီး 04 / 04 / 2012 အဆိုပါလေလံကိုစုဝေးစေကြပြီပြီးနောက်ဖျက်သိမ်း 14 ဒီဇင်ဘာလ 2011 ရက်ပေါင်းအားဖြင့်တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) 's ကို, re-တင်ဒါကြေညာထားခဲ့ပါတယ် "3 စုစုပေါင်းမိုဘိုင်းဆိပ်ကမ်းရိန်း (MHC) ဧည့်ခံဘီး" ။ ထိုနေ့၏နူးညံ့သော, 07 မေလ 2012 14 နာရီ: ထောက်ပံ့ကုန်ဦးစီးဌာနအစည်းအဝေးခန်းမများ၏ 00 TCDD ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေ (အခန်းတစ်ခန်းအမှတ် 1118) ခုနှစ်တွင်ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ ရရှိသောနိုင်ပါသည် -: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များသည်, 500 မှာဗဟို Veznesi (0312 309 05 15 4139 / 4409 Talatpaşa Boulevard ဘူတာÇankaya / တူရကီလျ) ၏ TCDD ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေ POUNDS ။ ref: ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဂျာနယ် 1059 / 19 2011 ဒီဇင်ဘာလ (SD) Source: www.yatirimlar.co ငါ
TCDD တူရကီ - မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားစုံ၏ Konya အမြင့်မြန်နှုန်းမီးရထားစီမံကိန်း6စုစုပေါင်းဝယ်ယူမှု IDB ဝယ်ယူရေး၏ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပြန်ကြေညာခံရဖို့မျှော်လင့်ထားကြသည်
TCDD လမ်းမကြီးစက်မှုလယ်ယာစီမံကိန်း 50 8 စုစုပေါင်းစုစုပေါင်းထိတွေ့မှုကကားများနှင့်တစ်ဦးဆီးနှင်းမှုတ်တံစားသုံးမှုကိုနူးညံ့၏နောက်ဆုံးလေလံရက်စွဲကိုရွှေ့ဆိုင်းခဲ့သည်
အဆိုပါ JCC ဖို့တင်ဒါအယူခံဝင်၏ရလဒ်အဘို့အ TCDD ဘီး Liebherr မိုဘိုင်းဆိပ်ကမ်းရိန်းကုမ္ပဏီ
နု၏ ​​TCDD ဘီးမိုဘိုင်းဆိပ်ကမ်း crane ဆုရှင် ITALGRU ကုမ္ပဏီတစ်ခုကစာချုပ်ဘို့ရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်
ဖွင့်ပွဲ - - Sezai ဆောက်လုပ်ရေးဖက်စပ်နှင့် Ozaras - İntekဖြစ်ပါသည် - နု Comsa လုပ် SA ၏ရလဒ်ဖို့ကန့်ကွက်ငြင်းပယ်၏နယူးBAŞKENTRAYစီမံကိန်း TCDD JCC Porr Bau GmbH သည်လေးစားလိုက်နာဖွဲ့စည်းပုံမိတ်ဖက် ...